Jobho anopindura Jehovha (1-6)
Shamwari nhatu dzinonzi dzine mhosva (7-9)
Jehovha anodzorera Jobho paaiva pakutanga (10-17)
Vanakomana nevanasikana vaJobho (13-15)
42 Jobho akabva apindura Jehovha achiti: 2 “Iye zvino ndava kuziva kuti munokwanisa kuita zvinhu zveseUye hapana chamunofunga kuita chamungatadza.+ 3 Mati, ‘Ndianiko uyu ari kudzikatidza zano rangu asingazivi?’+ Saka ndakataura, asi ndakanga ndisinganzwisisiNezvezvinhu zvinondishamisa kwazvo, zvandakanga ndisingazivi.+ 4 Mati, ‘Chiteerera, uye ini ndichataura. Ndichakubvunza, iwe wondiudza.’+ 5 Ndaingoita zvekunzwa nezvenyu,Asi iye zvino ndava kukuonai nemaziso angu. 6 Ndokusaka ndiri kudzora mashoko angu andakataura,+Uye ndiri kupfidza muguruva nemadota.”+ 7 Jehovha paakanga apedza kutaura naJobho, Jehovha akati kuna Erifazi muTemani: “Ndakutsamwirai kwazvo iwe neshamwari dzako mbiri,+ nekuti hamuna kutaura chokwadi pamusoro pangu+ sezvakaita mushumiri wangu Jobho. 8 Saka torai mikono yemombe minomwe nemakondohwe manomwe, muende kumushumiri wangu Jobho, mupe chibayiro chinopiswa chechivi chenyu.+ Uye mushumiri wangu Jobho achakunyengetererai. Chokwadi ndichagamuchira chikumbiro chake* kuti ndirege kukuitirai zvinoenderana neupenzi hwenyu, nekuti hamuna kutaura chokwadi nezvangu sezvakaita mushumiri wangu Jobho.” 9 Saka Erifazi muTemani, naBhiridhadhi muShuhi, naZofari muNaama, vakaenda vakanoita zvavakanga vaudzwa naJehovha. Uye Jehovha akagamuchira munyengetero waJobho. 10 Jobho paakanga anyengeterera shamwari dzake,+ Jehovha akabvisa matambudziko ake+ uye akamudzorera pfuma yake.* Jehovha akamupa zvaaiva nazvo zvapetwa kaviri.+ 11 Hama dzake dzese nedzaimbova shamwari dzake+ vakauya kwaari, vakadya naye vari mumba make. Vakachema naye, vakamunyaradza pamatambudziko ese akanga abvumirwa naJehovha kuti auye paari. Mumwe nemumwe wavo akamupa mari nerin’i yegoridhe. 12 Saka Jehovha akakomborera makore ekupedzisira eupenyu hwaJobho kupfuura ekutanga,+ uye Jobho akava nemakwai 14 000, ngamera 6 000, mombe 2 000,* nemadhongi* 1 000.+ 13 Akavawo nevamwe vanakomana vanomwe nevamwe vanasikana vatatu.+ 14 Akatumidza mwanasikana wekutanga kuti Jemima, wechipiri, Keziya, uye wechitatu, Kereni-hapuki. 15 Munyika iyoyo yese makanga musina vakadzi vakanaka sevanasikana vaJobho, uye baba vavo vakavapa nhaka pamwe chete nehanzvadzi dzavo. 16 Pashure peizvi, Jobho akararama kwemakore 140, uye akaona vana vake nevazukuru vake, zvizvarwa zvina. 17 Jobho akazofa, ararama upenyu hwakareba uye agutsikana.*
^ ChiHeb., “Chokwadi ndichasimudza chiso chake.”
^ ChiHeb., “Jehovha akachinja kutapwa kwaJobho.”
^ ChiHeb., “zvipani 1 000 zvemombe.”
^ ChiHeb., “nemadhongi makadzi.”
^ ChiHeb., “akwegura uye agutswa nemazuva.”